Ọrụ Ntuzi Ụlọ Ahịa Ebube Ejiri Ime Ka Ngwongwo Gị Gbanwe
UNLỌ MERE URLỌ PIRI ANY WILL GA-EME KA HLỌ G ST NA-AGA! Ọ B YOUR YOU INWE A Ụlọ UNI, KWESỊRỊ NA-AHỤ GỊ!
Jiri ihe onwunwe gị dị iche iche iji dọta onye zụrụ ahịa. Anyị pụrụ iche n'ụlọ ahịa ọrụ na-iji mee ka gị ihe onwunwe guzo si ìgwè mmadụ na-esi na ị hụrụ… ma na-na-eresị gị!
Brenda Thompson, Pụrụ Iche Home Marketing ọkachamara
Houselọ ọ bụla m nwere mgbe ahụ dị iche, site na ọnụ ụzọ ámá nkume na Osimiri Hudson na New York na post & beam home na acha karama agbakwunyere na mgbidi na North Carolina. Ahụmahụ mụ onwe m dị ka a asịwo na mgbe ahụ dị ka a na-ere ere kụrụ echiche na-eduga na oghere nke Special “Finds…” na 1995.
Dị ka gị, Enweela m ọtụtụ ihe pụrụ iche. Mgbe m dị njikere ire ha, achọpụtara m na ụlọ ọrụ ndị na-ere ala na ụlọ na ndị ọrụ ha enweghị ikike ịzụ ahịa. Ha amaghi ihe esi ere ụlọ pụrụ iche ma ọ bụ otu esi enweta ihe onwunwe pụrụ iche. Ya mere, ana m eji afọ ahịa m dị ka Director of Marketing nke New York Stock Exchange, jikọtara nke a na ikike ụlọ ala iji mejupụta ọdịiche dị oké mkpa na ụlọ ọrụ ụlọ ahịa, na voila! Achọpụtara "Ọchọta ..." pụrụ iche!
Ọ ga-amasị m inyere gị aka ire ihe onwunwe gị pụrụ iche. Own nwere a pụrụ iche “Chọta…” na ọkachamara ahịa mkpọsa dị mkpa iji nweta ya rere. Ọ na-ewe ezi okike na ikpughe sara mbara iji ree ụlọ pụrụ iche. Pụrụ iche “Finds…” bụ ezigbo ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ, mana karịa nke ahụ, anyị bụ ndị ahịa ahịa - na-agabiga nanị itinye mgbasa ozi na MLS mpaghara.
Ịzụ ụlọ gị pụrụ iche na oké osimiri nke ụlọ kuki-cutter bụ ụzọ doro anya ị ga-esi eleghara anya. Ịtụ anya na ndị na-azụ ahịa ga-ahụ ụlọ gị pụrụ iche site na iji usoro omenala dị ka ịjụ ha ka ha hụ nịịlị na nsị. Ọ na-ewe nke pụrụ iche ịzụ ụlọ pụrụ iche gị na iji dọta onye na-azụ ihe na-achọ ihe onwunwe pụrụ iche dị ka nke gị. Ọrụ pụrụ iche nke ụlọ ahịa anyị nwere ike inyere gị aka ịkpọsa ngwá ahịa gị iji dọta ndị na-azụ ahịa ziri ezi dị njikere ịkwụ ụgwọ gị.
Anyị na-ekepụta mgbasa ozi nke ọ bụla maka ndepụta aha anyị pụrụ iche. Mgbasa ozi gị ga-agụnye ọtụtụ usoro. Nke mbụ, anyị na-amata onye nwere ike ịzụta ya, wee mepụta aha maka ihe onwunwe enyere onye zụrụ ya, mepụta “akụkọ akụkọ” na-akpali akpali iji dọta onye zụrụ ya kwusaa ihe onwunwe gị na mba na gburugburu ụwa.
"Akụkọ ihe onwunwe" bụ naanị otu n'ime akara akara ụgha anyị. Ọ na-aga nke ọma. Ihe omuma ihe omuma gi gha eme ka ihe omuma gi di ndu. Ndị na-azụ ahịa ga-enwe ike "inwe mmetụta" dị ka ibi n'ụlọ gị na ala gị. A ga-ebuga ha "n'ụzọ mmetụta uche" site na ihe onwunwe gị site na ebe ọ bụla ha nọ.
Mgbe ahụ, anyị na-akpọsa ihe onwunwe gị n'ofe netwọkụ anyị - na-aga n'ihu na New York Times, Wall Street Journal, Robb Report, Dupont Registry, Mansion Global, International Herald na karịa 120 ọzọ na ebe nrụọrụ weebụ dijitalụ ọzọ.
Mgbe pụrụ iche “Finds…”, anyị na-ahịa ọkachamara, mgbe Realtors®. Anyị na-elekwasị anya na ahịa nke ụlọ ala pụrụ iche. Anyị bụ ụlọ ọrụ mgbasa ozi maka ụlọ ndị ọhụrụ. Ka anyị nyere gị aka ire ụlọ gị pụrụ iche.
Enwetara m ngwugwu nke ọrụ ụlọ ahịa dị iche iche iji gbasaa okwu ahụ ma nweta ihe onwunwe gị ma hụ ya ere!
Ourlọ Ahịa Anyị Pụrụ Iche Ọ Dịịrị Gị? - Email Me! brenda@specialfinds.com
Anyị na-emepụta “Akụkọ Gị”
Zụta ụlọ bụ mkpebi dị oke mmetụta na nke onwe. Anyị ga-ekewetde gị "Ngwongwo Akụkọ" ịrịọ mmetụta uche nke a asịwo.
Na-azụ ahịa ga-enwe ike “na-eche” ihe ọ dị ka ibi n'ụlọ gị, na gị mgbakwasị. A ga-ebuga ha "n'ụzọ mmetụta uche" site na ihe onwunwe gị.
“Mgbasa Ozi Worldwa n'inwa N'Onlinewa A Na-ebipụta Akwụkwọ n'”ntanet”
Mgbasa ozi ụlọ ahịa pụrụ iche gị ga-agụnye nnọọ ihe karịa ịtụkwasị ya na MLS. Maka ogologo ogologo nke ndepụta gị, a ga-ahụ ihe onwunwe gị na netwọk na New York Times, Wall Street Journal, Robb Report, Mansion Global na duPont Registry. *
“Kpughee Ala Gị Nye Ndị Na-azụta Ala Ọzọ”
Ndị na-azụ ahịa mba ofesi jiri ihe karịrị $ 153 ijeri na ụlọ obibi na US na 2017. Anyị na-eji ihe ndị si mba ọzọ azụ akpọrọ ihe. Mgbasa ozi ụlọ gị pụrụ iche ga-erute ndị na-ege gị ntị na mba ụwa na ihe karịrị 120 mgbasa ozi mba ụwa na China, Saudi Arabia, UAE, Russia, Germany na ndị ọzọ. Mụtakwuo…
Debe Homelọ Gị “N’iru Ndị Na-azụ Homelọ Pụrụ Iche” na Weebụsaịtị Anyị Mara Mma
Kpughee akụkụ kachasị mma na atụmatụ pụrụ iche nke ihe onwunwe gị pụrụ iche. Anyị zuru ụwa ọnụ na-eso nke Unique Home yerslọ-azụ ahịa na-eche ịhụ ụlọ gị.
A ga-etinye Nchọpụta Pụrụ Iche gị n'ụdị ụdị ụlọ ndị yiri ya na-eme ka ọ dị mfe maka ndị na-azụ ahịa ịchọta.
Soro ndị na-azụ ahịa jiri e-broshuọ mgbasa ozi gị. Mechaa Akụkọ Gị, akuko e-magazine gị na-enweta ndị na - agụ akwụkwọ na - arụ ọrụ n'akụkụ ọ bụla nke ụwa n'otu ntabi anya, site na kọmpụta ha yana ekwentị ọ bụla.
“Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi”
Tinye ihe onwunwe gị n'ihu ndị na-achụ nta ụlọ na saịtị mgbasa ozi mmekọrịta gụnyere Facebook na YouTube. Mgbasa ozi ụlọ gị pụrụ iche ga-agụnye ihuenyo HD Video na-enyo enyo na Google Earth Aerial Video Fly-over yana ezigbo Facebook Video Page niile ewepụtara iji nweta ihe onwunwe gị.
Mee mmetụta dị ukwuu na "Mmetụta Foto anyị". Hụ ihe onwunwe gị otu onye na-azụ ya si ahụ ya. Anyị ga-enyocha foto gị ma tụọ aro iji melite onyonyo nke ụlọ gị maka ọnụnọ gị n'ịntanetị yana maka ngosi.
Tinye ihe onwunwe gị na SpecialFinds.com
Naanị $ 14.00 kwa ọnwa!
Ndepụta Onwe M Ndepụta Onwe M
* Ihe ụfọdụ nke usoro omume ahịa anyị nwere ike ọ gaghị emetụta dị ka akwụkwọ dị iche iche na-ejedebe nsonye na ihe ọnụahịa dị na $ 500,000.
Nwee Mmetụta Iji Anyị Malite
Mpempe akwụkwọ Ịntanetị Dị Mfe